के रियल मड्रिड जर्सी नं ७ को ‘लिगेसी’ कायम रहला? - खेल - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
सविन राई काठमाडौँ भदौ १७
रियल मड्रिड जर्सी नं ७ भन्नेबित्तिकै क्रिस्टियानो रोनाल्डोले सेलेब्रेसन गरिरहेको दृश्य धेरैको मस्तिष्कमा आउँछ। त्यसमाथि उनको आकर्षक शैली ‘सु’ सेलेब्रेसनलाई पनि धेरैले बिर्सन सक्दैनन्।
रोनाल्डोबारे उनका फ्यानको दिमागमा यस्ता भावना सृजना हुनु स्वभाविक पनि हो। किनभने विश्वस्टार रोनाल्डोको ‘लिगेसी’ले हामीलाई मन्त्रमुग्ध तुल्याएको छ।
मड्रिडमा जर्सी नं ७ लगाएर खेलेको र उनले दिएको त्यो देन फुटबलका असली समर्थकले विर्सन सक्दैनन्। रोनाल्डो साँच्चै रियल मड्रिडका सुपरस्टार थिए। केहीले त उनलाई मड्रिडको इतिहासकै उत्कृष्ट खेलाडी भनेर व्याख्या गर्छन्। प्रदर्शन उल्लेखनीय हुँदाहुँदै पनि मड्रिडबाट रोनाल्डोजस्ता कीर्तिमानी खेलाडीको बहिर्गमन भयो। उनको मड्रिड छाड्ने निर्णयले विश्वभरका फुटबल समर्थक एकपटक स्तब्ध बने। जब रोनाल्डोले मड्रिड छाडे समर्थकले समेत मड्रिड छाडे।
इन्स्टाग्राम, फेसबुक तथा ट्वीटरमा विश्वभरबाट लाखौं समर्थकले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मड्रिडको पेजलाई अनफलो गरे। स्मरणीय के छ भने रोनाल्डोले क्लव छाडेपछि पहिलो पटक जब मड्रिड ला लिगाको नयाँ सिजनमा गत अगष्ट १९ तारिख घरेलु मैदानमा गेटाफेविरुद्ध प्रतिस्पर्धामा उत्रियो। दशवर्षे इतिहासमै पहिलो पटक ‘सान्टियागो बर्नेबेउ’ खाली देखियो। रोनाल्डो हुँदा सधैं भरिभराउ हुने घरेलु मैदानको क्षमता ८० हजारभन्दा बढीको छ। तर त्यस दिन स्टेडियममा ४८ हजार दर्शककोमात्र उपस्थिति देखियो। जसलाई मड्रिडले अझै लज्जास्पद दिनको रुपमा लिनेछ। त्यसबेला फुटबलका विश्लेषकले ‘रोनाल्डोसँगै दर्शकले समेत मड्रिड छाडे’ भनेर विश्लेषण गरेका थिए।
रोनाल्डोको बहिर्गमनले मड्रिडलाई कमजोर बनाएकै थियो। गत महिना रोनाल्डोविना यूइएफए सुपरकपको फाइनलमा उत्रनुअघि कप्तान रामोसले मड्रिड इतिहास बोकेको टोली भएका कारण रोनाल्डो विना पनि मड्रिड बलियो भएको दाबी गरेका थिए। तर मड्रिड डर्बीमा एथ्लेटिको मड्रिडले रियल मड्रिडलाई ४–२ ले पराजित ग¥यो। रोनाल्डो युभेन्ट्समा भर्ति भइसकेको अवस्थामा मड्रिडलाई रोनाल्डोजस्तै स्टार खेलाडीको खाँचो त थियो नै। त्यसैबखत मड्रिडको पराजयसँगै समर्थकहरुले स्टार खेलाडी भित्राउन दबाब दिए। सुरुवातमा मड्रिडले नेमार, एमबाप्पे, ह्याजार्ड, लेवानडोस्कीजस्ता स्टार खेलाडी भित्राउने र जर्सी नं ७ हस्तान्तरण गर्ने संकेत गरे पनि तर त्यो संभव भएन।
अन्तमा मड्रिडले आफ्नै पूर्व खेलाडी जो फ्रान्सको ‘लियोन’बाट खेल्थे उनै २५ वर्षीय ‘मारियानो डियाज’लाई गत हप्ता अनुबन्ध गर्दै दुई दिनअघि जर्सी नं ७ हस्तान्तरण गरेको छ। तर यतिबेला के मारियानोले जर्सी नं ७ को लिगेसीलाई कायम राख्न सक्लान त? भन्ने प्रश्नहरु खडा भएका छन्। सबैले आफ्नै किसिमका टीकाटिप्पणी गरेका छन्। केहीले मड्रिडको जर्सी नं ७ लगाउनु मारियानोका लागि भाग्यको कुरा हो भनेका छन् भने केहीले महत्वपूर्ण अवसर साथै चुनौती दुवै भनेका छन्। अन्यले रोनाल्डोको जर्सी नं ७ को लिगेसी मारियानोले कायम राख्न नसक्ने बताउँछन्।
टीकाटिप्पणीलाई आफ्नै स्थानमा छाडेर हेर्दापनि स्पेनिस जायन्ट्स रियल मड्रिडमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोले लगाएको जर्सी नं ७ को ऐतिहासिक महत्व छ। मड्रिडको जर्सी नं ७ लगाएर रोनाल्डोले ९ वर्षको बसाइमा क्लवलाई दर्जनौ उपाधि दिलाए। रोनाल्डोले सोही जर्सी लगाएर विश्व फुटबलमा महत्वपूर्ण कीर्तिमानी बनाए। पाँच पटक ‘बालुन डि’ओर’ अवार्ड जित्दा रोनाल्डोले मड्रिडमा जर्सी नं ७ लगाएर चार पटक त्यस अवार्ड पाए। रोनाल्डोले मड्रिडमा ७ नम्बरे जर्सी लगाएरै मड्रिड इतिहासकै सर्वाधिक गोलकर्ताको गोल रेकर्ड तोडे अनि नयाँ रेकर्ड बनाए। उनले मड्रिड बसाइमा ४ सय ५० गोल गरेका छन्। जुन सर्वाधिक गोलकर्ताको रेकर्ड तोड्न लगभग असम्भव मानिन्छ भनेर फुटबल विश्लेषकहरु बताउँछन्। रोनाल्डोले मड्रिडमा चार च्याम्पियन्स लिग जित्दा समेत जर्सी नं ७ निकै महत्वपूर्ण रह्यो। रोनाल्डोले मड्रिडमा जर्सी नं ७ लगाएर जम्मा १५ महत्वपूर्ण उपाधि जितेका थिए। रोनाल्डो गोल मेसिन मानिन्थे। यी र यस्तै किसिमका चुनौतीको घेरामा मड्रिडका जर्सी नं ७ पाएका खेलाडी मारियानो छन्।
को हुन मारियानो?
स्पेनमा जन्मिएका मारियानो डियाज पूर्व मड्रिड खेलाडी नै हुन्। २५ वर्षीय मारियानोले सन् २०१६–१७ को सिजनमा मड्रिडबाट जिनेदिन जिदानको प्रशिक्षणमा खेलेका थिए। करिम बेन्जेमालाई ढाडको समस्या भएपछि सब्सटीट्युट खेलाडी मारियानोलाई मुख्य टोलीमा राखिएको थियो। त्यस सिजन ८ खेल खेल्दा मड्रिडको ला लिगा र च्याम्पियन्स लिग उपाधि जित्नमा उनको उत्कृष्ट भूमिका रह्यो।
उनले अक्टोबर २६ मा डिपोर्टिभो विरुद्ध भएको कोपा डेल रेको पहिलो लेगमा एक गोल गर्दै डेब्यु गोल गरेका थिए। त्यसबेला उनी वैकल्पिक खेलाडीको रुपमा मैदान प्रवेश गरेका थिए। दोस्रो लेगमा भने उनले ह्याट्रिक गरेका थिए।
त्यसपछि २०१७÷१८ को सिजन उनलाई फ्रान्सको लियोन पठाइयो। तर एक सिजनपछि नै मड्रिडले उनलाई पुन मड्रिड फिर्ता बोलाएको छ। जम्मा ८ मिलियन युरोमा लियोन पुगेका मारियानोलाई मड्रिडले २१.५ मिलियन युरो तिर्दै पाँच वर्षका लागि यतिबेला अनुबन्ध गरेको छ। अब उनले रोनाल्डोको स्थान लिन सक्लान या सक्दैनन् त्यो उनको प्रदर्शनले नै प्रमाण गर्नेछ।
यसअघि मारियानोले सन् २०१२ मा मड्रिडकै युथ टोलीबाट खेलेका थिए। त्यसपछि उनी कास्टिला गएका थिए।
प्रकाशित १७ भदौ २०७५, आइतबार | 2018-09-02 13:41:35